Họtelu ndi di na Osogbo, Osun - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Hotels in Dada Estate
Hotels in Asubiaro
Hotels in Oke-Onitii
Hotels in Obaagun
Osogbo is the state capital of Nigeria's Osun state, and it's one of the ...
Ihe Nkowa Banyere Obodo Osogbo, Nigeria
Osogbo (bu nke a na akpọ " Oshogbo " ) bụ obodo nke di na ndịda-ọdịda anyanwụ na Nigeria nwere onu ogugu madu kariri puku abuo na iri ise. O bụ obodo nwere otutu ndị ihe omenala nke ukwuu na ihe ochie n'oge gara aga di omimi dị nsọ n'etiti ihe ngwangwa oru ọganihu na nmepe, ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na arụsi ọrụ ike na kwa mbawanye na ọnụ ogugu nke họtelu.
Na oke okpomoke nke anyanwu, enwere ọdọ mmiri nke hotelu di maka isaa ahu na ya, ihu eluigwe na-ekpo ọkụ I ga a choputa, ụmụaka na-enweghị akpụkpọ ụkwụ na a ga ulo akwụkwọ na achịkwa ọchị ji cha ekwenti Android na aka ha na otutu ihe ọnụ-atọ dịgasị iche iche di onu ala dị na okporo ụzọ bu nke I ga enweta na ihe fachi-fachi ugboala nke okporo uzo, I ga enweta otutu ihe necheta ndi di nma mgbe i laghachiri n'ụlọ gi.
Ebe Ogige Ihe Akụkọ Na Njem Nleta ndi di na Osogbo
Ndi mbụ bi na Osogbo bụ ndị nwere nkwanye ugwu dị nsọ nye omenala; nka mere ọ bụrụ na ị bu onye hụrụ omenala Afrika di iche iche n’anya n'ezie a, mgbe kasị mma I ga njem nleta na obodo Osogbo bụ na onwa Asatọ n'oge Ememme nke Osun. Ogige Ihu arusi nke Osun Osogbo dị nsọ amama n'akụkọ n'obodo bụ nke so na otu nime ndi akporo ogige nketa nke UNESCO 981nke mba ụwa.
Ndi Osogbo na-eme ezi ihe nka pụrụ iche, nka naanị bụ otu ihe iga eji hapụ onu ụlọ gị na họtelu wee malite njem nkpaghari maka ikpokọta ihe ga aghọ ihe mkpokota puru iche nke mba Afrika nye gi onwe gị site na ahia ukwu Oja Oba (Ahia nke Onye Eze ). Ị ga- enweta otutu ihe dịgasị iche iche ị ga eme nhọrọ site na ya: obere ụmụ ihe oyiyi, ihe mgba n’aka, Adire, (ákwà nke kee ma sijie), ihe osise na ihe ndị ọzọ. Dị ka ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndi dị n'obodo a bu nke apuru izụta na ọnụ ahia di ala.
Ihe Atụmatụ maka ndi njem na Osogbo
Osogbo nwere ezi okporo ụzọ nke nwere njikota site na otu ga na ọzọ. Ọ bụ ezi ihe ndumodu na I ga akwu-ugwo maka ugboala tagzi nke onwe gi. Ahapụkwala ụlọ họtelu gị na-enweghị igwe foto; otutu ihe ndi di nma bu nke I ga ahuta. Na obodo Osogbo a mara mma, ị ga ahụ ezi ihe site na I na inabata akụkọ ihe ndi mere mgbe ochie ndi dị nsọ na ihe ọdịbendị (omenala) nke ndị Yoruba, oke ihe mmepe ngwangwa nke mpaghara obodo a, na ihe ekpo-mo-ọkụ nke anyanwụ ya mara mma na acha n'afọ .nile
Họtelu Dada Estate Họtelu Asubiaro Họtelu Oroki Estate Họtelu Ilesa Họtelu Ife Họtelu Ede
Họtelu Iwo Họtelu Ejigbo Họtelu Ila Họtelu Aiyedaade Họtelu Irewole Họtelu Ilobu
Sonap Hotel & Suites Regina Suites Ideal Nest Hotel Palmcrest Hotels And Suites Royal Spring Holiday Inn, Osogbo Atlantis Grand Suites